विदा भयो २०७४ साल, आयो नयाँ वर्ष २०७५, कस्तो रह्यो २०७४ साल ? | mulkhabar.com
विदा भयो २०७४ साल, आयो नयाँ वर्ष २०७५, कस्तो रह्यो २०७४ साल ?
April 14, 2018 | 7:08 am 331 Hits
आज बाट २०७४ सालले विदा लिएको छ र हामी माझ नयाँ वर्षको रुपमा २०७५ सालले प्रवेश गरेको छ । २०७४ साल नेपालको इतिहासमा राजनैतिक उपलव्धीको दृष्टिकोणबाट उपलव्धीमूलक रहेको छ भने आर्थिक उपलव्धीको दृष्टिकोणबाट मध्यम देखिन्छ । दुर्घटनाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त उच्च जोखीमयुक्तको देखियो भने विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणबाट सन्तोषजनक रहेको छ ।
राजनीतिक रुपमा २०७४ साल निर्वाचनको वर्ष रह्यो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको वर्ष बन्यो । यो वर्ष देशमा ३ तहको निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न भए भने स्थायी प्रकृतिको सरकार निर्माण भई विकास र समृद्धिको लागि आधार तयार भएको छ ।
सात प्रदेशको संघिय संरचनाले पूर्णता मात्रै पाएन सरकार पाइसकेको छ र कानुन निर्माण लगायतका कामहरु अगाडि वढिसकेका छन् । मूलुकमा सापेक्षीक रुपमा स्थायी शान्ति कायम भएको छ । यातायातमा सिण्डीकेटको डरलाग्दो प्रथाको अन्त्य हुन लागेको छ, भ्रष्टाचार विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।
सामाजिक कुरुती र विसंगतिहरुको दृष्टिकोणबाट यो वर्ष अत्यन्त भद्धा देखिन पुग्यो । बोक्सी र बलत्कार जस्ता विषयहरु दिनहुँ अखबारका पानामा प्रमूख समाचारको रुपमा देखिए । विमान दुर्घटनादेखि गाडि दुर्घटनाका असंख्य घटनाहरुले नेपालीहरुलाई शान्त रहन दिएन ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकमात्र छोरा प्रकाश दाहाल गुमाए । मंसिर ३ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालको हृदयघातका कारण निधन भयो ।
चुनावको मुखैमा प्रकाशको निधन भए पनि प्रचण्ड परिवार चुनावी दौडाहामा ठाउँठाउँमा पुगे । चुनावमा स्वर्गीय प्रकाशका पिता प्रचण्ड र पत्नी बिना दुवै विजयी भए । अहिले विना खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री छीन् ।
असोज १२ मा वरिष्ठ संचारकर्मी वासुदेव मुनालको निधन भयो । असोज २३ गते निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको काठमाडौंमा गोली हानी हत्या भयो । कात्तिक २५ गते पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको निधन भयो ।
पुसमा संखुवासभामा भएको जीप दुर्घटनामा मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित ६ जनाको ज्यान गयो । कपिलवस्तुबाट काठमाडौं आउनेक्रममा माघ २७ गते तत्कालीन सिँचाइ सचिव रामानन्द साहको गाडी त्रिशुलीमा खस्यो । साहसहित ३ जनाको ज्यान गयो ।
हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई चैत १९ गते पत्नीशोक पर्‍यो । लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित उहाँकी धर्मपत्नी यशोदा सुवेदीको निधन भएको हो । चैत १६ गते नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको निधन भयो । हृदयघातका कारण भारतको दिल्लीमा निधन भएको हो ।
फागुन २८ गते बंगलादेशबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यूएस बंगला विमान दुर्घटना हुँदा ५१ जनाको ज्यान गयो । जेठमा गोमा एअरको जहाज लुक्लामा दुर्घटना हुँदा पाइलटको ज्यान गयो, २ जना घाइते भए ।
यो वर्ष तराईमा वाढी र डुवान तथा पहाडमा पहिरो र वाढीले जनजीवन तहस नहस बनायो । साउनमा आएको बाढीले तराईको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । झण्डै डेढसय जनाको ज्यान गयो । हजारौं विस्थापित भए । सयौं विगाह जग्गामा लगाइएको खेती नष्ट भयो ।
२०७४ सालमा गर्मी तथा जाडो महिनामा हुने शीतलहर, भाइरल, स्क्रबटाइफस, स्वाइनफ्लु लगायतका रोग तथा संक्रमणबाट पनि धेरैले ज्यान गुमाए । जाजरकोटमा यो बर्ष पनि भाइरल भैलियो । धादिङ, दैलेख लगायत बिभिन्न ठाउँमा साना ठूला गाडी दुर्घटनामा दर्जनौंको ज्यान गयो ।
जे होस २०७४ साल विभिन्न आरोह अवरोह र विपत सहित विदा भयो र २०७५ साल हामीबीच आएको छ । पुरानो वर्षमा भएका सबै विकृति र विसंगतीहरु तथा कमजोरीहरु लाई नयाँ वर्षले तिालञ्जली दिंदै सदाचार, स्वास्थ्य, सुविचार, सुसंस्कार र सम्वृद्धि दिन सकोस यही शुभकामना ।